भीम रावलको कन्तविजोग, गृहनगरकै मेयर र उपमेयरले पनि दिएनन् साथ बिचरा !
September 7, 2021 N88LeaveaComment on भीम रावलको कन्तविजोग, गृहनगरकै मेयर र उपमेयरले पनि दिएनन् साथ बिचरा !
काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावल आफ्नै गृहनगरमा पनि एक्लीएका छन् । अछामका अधिकांश नेता तथा जनप्रतिनिधिहरु माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलिरहँदा उनकै गृहनगरकै मेयर र उपमेयरले पनि उनको साथ छाडेका हुन् । रावलको गृहनगर अछामको साँफेबगर नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर कुँवर र उपमेयर बिर्मलादेवी बुढथापाले आइतबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा सनाखत गरेका छन् । मेयर कुँवर […]
September 7, 2021 N88LeaveaComment on गुल्मीमा माधव नेपालको पार्टी प्रतिनिधिबिहिन, रामकुमारी झाक्रीकाे चुरीफुरी मात्रै, गृहजिल्लामा केही ख्यासिनन् !
काठमाडाैं । गुल्मीमा जनप्रतिनिधिका हिसाबले नेकपा एमाले विभाजनको असर शून्य देखिएको छ । एमाले विभाजनपछि दल रोज्न पाउने आज अन्तिम दिन भदौ २२ गते कार्यालय समय अवधिभित्र एक जना पनि जनप्रतिनिधि नेकपा एकीकृत समाजवादी दल रोज्न नआएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी माया कुँवरले जानकारी दिइन् । कुँवरले दिएको विवरण अनुसार गुल्मीका २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका […]
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भ्रस्टाचारी भनेका छन् । घिसिङप्रति गम्भीर आरोप लगाउँदै ओलीले यस्तो बताएका हुन्। उनले घिसिङले ट्रान्सफर्मर खरिद भएको र उनैलाई फेरि प्राधिकरणकी जिम्मेवारी दिइएको बताए।मंगलबार एमाले कास्कीको बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले हेटौंडामा अहिले ट्रान्सफर्मरको एउटा सहर रहेको बताए। […]
September 7, 2021 N88LeaveaComment on हिम्मतवाला वडाध्यक्ष जसले लगाए भारतसँग जोडिएको सीमामा काँडेतार ! सम्मानस्वरुप शेयर गरौँ !
ठोरी (पर्सा) । लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले मिचेको सीमाको विषयलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउनुपर्ने भन्दै वि रो ध को आवाज उठिरहेको बेला पर्साको पश्चिमी क्षेत्र ठोरी गाउँपालिकाका एक वडाध्यक्षले भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा काँडेतार नै लगाइदिएका छन् । ठोरी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष सूर्य लामाले भारतको विहारसँग सीमा जोडिएको वडा–३ अन्तर्गत […]
एमसीसीबारे सांसदलाई देउवाले दिए यस्ताे निर्देशन, अब के गर्लान् ?
September 7, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसीबारे सांसदलाई देउवाले दिए यस्ताे निर्देशन, अब के गर्लान् ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे बुझेका सांसदहरुले मात्र बोल्न निर्देशन दिएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले एमसीसी सम्झौता के गर्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा संसदीय दलका नेता देउवाले अघिल्ला सरकारहरुले पनि कानून बनाएर एमसीसीलाई अघि बढाउँदै आएको बताए । यो प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरेको […]
September 7, 2021 N88LeaveaComment on पादको गन्धले लामखुट्टे मरेपछि पाए यी व्यक्तिले पाद्‍ने जागिर !
एक व्यक्तिको विषाक्तका पादका कारण लामखुट्टै मरेका छन् । यो सत्य घटना हो । ती व्यक्तिको पादको विषाक्तका कारण लामखुट्टे मरेपछि वैज्ञानिकहरुले पादमा पाइएको रसायनबारे अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । ती व्यक्तिले पादेपछि त्यसको असर ६ मिटरसम्म फैलिने गरेको छ । पादको विषाक्त फैलिएको ठाउँमा लामखुट्टेलगायत विभिन्न स-साना किराहरु मर्ने गरेका छन् । द मिररकाअनुसार […]
एमसीसी पास हुँदैनः प्रचण्ड
September 7, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसी पास हुँदैनः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी पास नहुने बताएका छन् । आज वाइसिएलको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी पास नहुने बताएका हुन् । ‘एमसीसी पास हुँदैन,’ प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी वाइसिएल नेता भने, ‘हामीले अमेरिकालाई कुटनीतिक नोट पठाएकोमा जवाफ आएन । जवाफ नआएकाले एमसीसी पास हुँदैन ।’ […]
यस्ताे छ नेपाली कांग्रेसकाे १४ औं महाधिवेशनको नारा
September 7, 2021 N88LeaveaComment on यस्ताे छ नेपाली कांग्रेसकाे १४ औं महाधिवेशनको नारा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आसन्न १४औँ महाधिवेशन प्रचारात्मक नारा तय गरेको छ । पार्टीको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागको बैठकले महाधिवेशनका लागि ‘कांग्रेसमा उत्साह, एकता, रुपान्तरण सफल बनाऔँ १४औँ महाधिवेशन’ भन्ने नारा तय गरेको हो । विभागका प्रमुख एवं पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा नीति र विचार केन्द्रित प्रचारको […]
September 7, 2021 N88LeaveaComment on माधवको पार्टीबाट ६ मन्त्री फाइनल !
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्सी (बुधबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत पूण्र्ता दिन नसकेको भनेर आलोचना भैरहेको थियो । तर, गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुसँग सहमतिमा प्रधानमन्त्री देउवाले यही बुधबार सरकारलाई पूणर्ता दिने भएका हुन् । मन्त्रालयको भागबण्डासमेत भैसकेको छ । कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाउने भएको छ भने […]
माधव नेपालकाे पार्टीबाट यी दुई जना बन्ने भए आलोपालो मन्त्री !
September 7, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपालकाे पार्टीबाट यी दुई जना बन्ने भए आलोपालो मन्त्री !
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा जानेहरुको लगभग टुंगो लागिसकेको छ । नेकपा एसको हाइकमान्ड बैठकले मन्त्रिहरुको अन्तिम नामावली टुंगो लगाउने भएको छ । मन्त्रीको दौडमा प्रतिनिधि सभाका २३ मध्ये २१ जना रहेका छन् । सबैको पालो पुर्याउने गरी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले व्यवस्थापन गर्ने भएका छन् । आलोपालो मन्त्री बनाएर सहमति निकाल्ने तयारी नेपालले गरेका छन् […]